Tolow Ma Runbaa In Nimankii Laqab-qabtay? Waa Kuwama? - Cakaara News
Tolow Ma Runbaa In Nimankii Laqab-qabtay? Waa Kuwama?
Jigjiga(CN) Khamiis.April.16.2015, ciidamada gaarka ah ee sida raha u booda ee kadhashay ilmadii iyo dantii shacabka DDSI ayaa tan iyo intii la abuuray waxay si dhab ah u sugeen nabaddii iyo xasiloonidii DDSI waxaana wakhti xaadirkan DDSI si dhab ah uga hirgalay isbadal wayn oo horumar iyo nabadagliyo xasilooniyeedba leh.
Ubo ayaa markay hubsatay xaalada dhabta ah ee ay dantu u run sheegtay waxay isku dayday inay soo galiso DDSI niman UBO ah oo ay shacbiya soo waashay kuwaas oo ahaa 9 nin oo magacduudu hoos ku qorantahay gaadhigoodii iyo 9 qori.
Hadaba qorshahan oo 3 bilood ahaa ayaa waxaa lasocday sir doonka ciidamada gaarka ah ee DDSI ee leh indhaha gor gorka ee habeen iyo maalinba meel fog cameradoodu wax kasoo qabato islamarkaana leh taagtigo heer sare ah ayaa waxay diiradoodu si toos ah u haysay nimankan oo kusugnaa Baladwayne.
Nimankan ayaa rabay inay kasoo galaan deegaanada u dhaxeeya Fer Feer, Mustaxiil, Shilaabo ilaa iyo Baarey kadibna ogaadey inaysan kasoo gali karin ayaa dib laamiga Baladwayne ugu laabtay, waxayna markii danbe ku riyoodeen inay si naf lacaarid ah uga soo galaan dhanka deegaanka Bookh, iyadoo aysan indhahooda hal daqiiqo kabixin Kaameerada sirdoonka ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee DDSI kuwaas oo nimankan sida adhiga u raacayay.
Ciidaamada Liyuuga ayaa kooxdan naf lacaaridka ah fursad u siiyay wado ay kasoo galaan islamarkaana uu qorshaha ciidanku ahaa iyagoon hal xabada lagu ridin in laqab qabto. Kadibna dabino si fiican loo sameeyay loo dhigay, iyadoo makrafoonka loogu sheegay inaysan jirin wado kale oo u banaan inay isdhiibaan mooyee.
Sida naloo xaqiijiyay qorshahan ayaa wuxuu ahaa mid ay hagayeen 2 iyo 3 kamida hogaamin isku sheegta Ubo iyo shacbiya iyadoo aysan inta badan waxba ka ogayn hogaamin isku sheegta kale ee UBO ee qurbaha oo laga qarinayay xidhiidhna aysan layeelan. Balse waxay wakhtigan khasaare wayn kasoo gaadhay nimanka ah Korneel Muuse, Dacamo, iyo Isiyaas.
Hadaba sirdoonka ciidamada gaarka ah ee Liyuu Booliska ayaa aad uga mahadcelinaya qaar kamida hogaaminta Ubo oo qorshahan sirdoonka kaalin kaqaatay.
Hadaba waa kuwan magacda ubada xadka lagasoo qabtay:
1- Shaafi Caydiid Mursal (Ree Amaadin)
2- Axmed Nuur Qaalib Dayab (Ugaas Nuuur)
3- Cabdirashiid Yuusuf Cabdi (Ugaas Kooshin)
4- Muxumed Maxamed Cismaan (Maxaad-roon)
5- Xuseen Maxamed Cumar (Cabdalle)
6- Maxamed Xuseen Cabdi (Cabdalle)
7- C/nuur Shugri Muxumed (Cawl-yahan)
8- Maxamed Badal Nuur (R/haaruun)
9- Mukhtaar Maxamed Cabdi (Shishoore)
10- C/qaadir Bashiir Axmed (Leel-kase)-dirawal iyo Gaadhi cusub oo Maarkeet ah iyo 9 qori.
Labada nin ee kala ah 1) Xuseen Maxamed Cumar iyo 2) Maxamed Xuseen Cabdi, waxay sanad kahor joogi jireen guriga Cabdi Sonkor oo ay ay isku jifo yihiin. Xogo badan oo dhamaystiran oo qorshahan kusaabsan ayaad wararkayaga danbe ee CkaaraNews ku maqli doontaan haduu Eebe raali kanoqdo.